Sina 5 sosona A5 fanapahana mat, 661A5, fanasitranana tena famonoana tsihy fanamboarana sy ny orinasa | Allwin
5 sosona A5 Cutting Mat, 661A5, Fanapahana fanasitranana tena tsihy
Sfanasitranana elf A5 orinasa fametahana mat mivantana
Ny fandriana fanapahana dia iray amin'ireo fitaovana izay tsy maintsy ampitaovin'ireo mpilalao modely amin'ny taratasy;
FANASITRANANA NY OLANA: Ny fahaizan'ny tena manasitrana tena dia manjary manjavona tanteraka ary tsy voakitika ny fanapahana miverimberina, mitazona faritra malefaka kokoa ary manitatra ny fiainan'ny pad sy ny fanapahana.
Ao amin'ny Inches & cm, Double-Sided ： Ny torolàlana Imperial sy Metric dia vita printy avo lenta, hiantohana ny fanapahana mahitsy sy ny asa avo lenta isaky ny mandeha.
QUALITY MAHALELO: Tsy misaintsaina, tsy misolelaka ary manana faharetana avo lenta amin'ny lelany. Ny hatevin'ny 3mm dia mahatonga azy matevina sy maharitra. Fifanentanana matanjaka sy faharetana tsara, mba hahafahana miondrika araka ny sitrapony.
Azo ampiharina malalaka: Ity kidoro fanapahana ity dia mety amin'ny karazana fanoratana sy sary hosodoko, pad tanana, sary sokitra vita amin'ny asa-tanana, fanapahana horonantsary ratsy, fanapahana taratasy, sns. .
Fitaovana avo lenta izay tsy hanafosafo: afaka mahatsapa tsara ianao amin'ny fampiasana matara manapaka manohitra ny famolahana. Mahatonga fanomezana lehibe ho an'ny mpampianatra, mpanao asa tanana ary quilter mazoto.
Item Model Model 661A5
Item lanja 0.16kg isaky ny tapa
Vokatry ny vokatra 8,7 x 5,9 x 0,12 santimetatra / 22 x 15 x 0,3 cm
Warranty & Fanohanana;
Warranty momba ny vokatra: Amin'ny ankapobeny dia tsy hisy ny olana aorian'ny fivarotana, miatrika olana mavitrika isika aorian'ny fivarotana sy ny fanohanana aorian'ny fivarotana vokatra 1 taona.
Previous: 5 sosona A4 fanapahana tsihy, 661A4, famonoan-tena
Manaraka: 3 sosona A1 fanapahana tsihy, 883A1, fanasitranana tena tsihy fanapahana